Iyo Apple Watch Series 3 ichasvika kuMexico, Brazil, South Korea uye iyo UAE svondo rinouya | Ndinobva mac
Kuwedzera kwenyika dzese kweApple Watch Series 3 LTE, iri kunonoka kupfuura zvakajairwa, asi panguva ino zvinoita sekunge hazvisi nekuda kwekutsvedza uko dzimwe nguva kunoratidzwa neApple, asi panguva ino, imo nekuti vashandisi havasi kuita zvese zvavanogona kuti vape iyi modhi kune vatengi vavo.
Iyo Cupertino-based kambani yakazivisa zviri pamutemo kuti kuwanikwa kweApple Watch LTE ichawedzerwa svondo rinouya mune mimwe misika. Mexico, UAE, South Korea neBrazil ichave nyika dzinotevera uko vashandisi veApple vachakwanisa kunakidzwa neiyi LTE vhezheni, chishandiso chinogona kushanda zvakazvimiririra chisina kubatanidzwa neiyo iPhone pasina nguva.
MuMexico, iyo Apple Watch ichauya kubva kuAT & T neTelcel pamutengo we 8.999 pesos yeiyo 38 mm modhi uye 9.699 pesos yeiyo 42 mm modhi. MuUnited Arab Emirates (UAE), ichave ichiwanikwa kuburikidza nemushandi weEtisalat nemutengo wekutanga we1.364 D. MuSouth Korea, kuwanikwa kwayo kunobva kune anoshanda Uplus Network, nepo kuBrazil ichave nekambani yeClaro. Iyo 3-millimeter Apple Watch Series 38 ichave mutengo paR $ 3.199 nepo iyo 42-millimeter modhi ichatora R $ 3.449.
Kana iwe uchigara mune chero eaya nyika, Kubva munaJune 8, unogona kuchengetedza iyo Apple Watch Series 3 asi hauchazvigamuchira kusvika muna Chikumi unotevera. Iyo Apple Watch Series 15 LTE inoshanda neyemagetsi sim, kwete yepanyama, saka kuwanikwa kweaya mamodheru kunogara kuchisanganiswa neanoshanda, nekudaro chikamu chakakosha chekuwedzera kweiyi modhi mune dzimwe nyika.
Panguva ino, zvinoita sekunge vashandisi veSpanish vachiri kusapa iyi sarudzo kune Cupertino-based kambani, chinhu chinonyanya kushamisa tichifunga kuti iyo Samsung Gear S2, iyo zvakare ine yemagetsi sim, yave ichiwanikwa muOrange katalog yemakore maviri apfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch Series 3 ichasvika kuMexico, Brazil, South Korea uye iyo UAE svondo rinouya
Mupi Barrios Untiveros akadaro
Idzi ndidzo dzakanakisa nhau !!!!!
Pindura Anopa Barrios Untiveros